Technics Czech Airlines bịanyere aka na nkwekọrịta mmezi nke isi na Air Corsica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Technics Czech Airlines bịanyere aka na nkwekọrịta mmezi nke isi na Air Corsica
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Technology • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nkwekorita ya na onye na-ebu ụgbọelu nke France na-agụnye arụmọrụ nke ndenye ndozi na ndozi ndozi dị mgbagwoju anya dabere na ndị nrụpụta na ndị ọrụ ọrụ
Czech Airlines Technics iji nye ndị isi mmezi ọrụ ụgbọ elu Air Corsica
Aircraftgbọ elu abụọ Air Corsica Airbus A320 ga-agabiga ọrụ na hangar dị na Václav Havel Airport Prague n'oge nkeji mbụ nke 2021
N'afọ gara aga, ndị otu CSAT dechara ihe nyocha 70 maka ndozi ndozi n'ime ngalaba ya
Igwe ụgbọ elu Czech (CSAT) etinyela aka na nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ yana Air Corsica. Dabere na ọmịiko na-aga nke ọma, ụgbọ elu abụọ Airbus A320 ga-ahụgharị ihe ndozi na hangar dị na Václav Havel Airport Prague n'oge nke mbụ nke 2021. N'afọ gara aga, ndị otu CSAT nwere ahụmịhe gụchara akwụkwọ nlekọta ndozi 70 n'ime ngalaba nkewa ya.
“Na mbido 2021, anyị malitere ibikọ ọnụ Corsica ụgbọ elu anyị nwere obi ụtọ na ha sonyeere pọtụfoliyo ndị ahịa anyị. Anyị kwenyesiri ike na anyị ga-anọgide na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọrụ ndị ọzọ n'ọdịnihu. N'agbanyeghị ọnọdụ ịma aka ugbu a nke COVID-19 kpatara, anyị jisiri ike ịnọgide na-enwe iwu ọrụ ndị ọzọ na iji ikike nke hangar na ndị otu anyị. Ahịa MRO na-asọ mpi mgbe niile, ya mere, ihe ịga nke ọma anyị na obi ọmịiko ọzọ ekwenyela na afọ nke ahụmịhe, ntụnye aka na ọnọdụ azụmaahịa dị ukwuu na-enyere CSAT aka ọ bụghị naanị ndị ahịa ogologo oge dị ugbu a, kamakwa ndị ahịa ọhụrụ, ”Pavel Hales, Onye isi oche nke Czechlọ ọrụ ndị isi ụgbọ mmiri Czech Airlines, kwuru.
Nkwekorita ya na onye na-ebu ụgbọelu French na-agụnye arụmọrụ nke ndenye ndozi na ndozi ndozi dị mgbagwoju anya dabere na ndị nrụpụta na ndị ọrụ ọrụ. Kpọmkwem, ụgbọ elu abụọ Airbus A320 dị warara, nke Air Corsica na-ejikarị na ụgbọ elu ya na-aga ebe dị iche iche gafee Europe, ga-enwe ndozi mmezi na hangar F nke dị na Prague Airport ogige na nkeji nke mbụ nke 2021.
N'afọ gara aga, n'agbanyeghị ọrịa ntiwapụ nke COVID-19, nke nwere mmetụta dị ukwuu na mpaghara ụgbọelu niile, Czech Airlines Technics jisiri ike mejuputa ma mezue mmezi ihe ndabere 70 na Boeing 737, Airbus A320 Family na ụgbọ elu ATR. Finnair, Transavia ụgbọ elu, Czech ụgbọ elu, Smartwings na NEOS so na ndị kacha mkpa Czech Airlines Technics ahịa na isi mmezi nkewa. Na 2020, otu ndị ọrụ CSAT rụkwaara ọrụ maka ndị ahịa ọhụụ, ya bụ Jet2.com, Austrian Airlines na ndị ahịa sitere na gọọmentị na ndị ọrụ nzuzo.
Nyocha ego mgbe niile, ndozi ndị ọzọ na-achọsi ike, mgbanwe maka sistemụ na usoro ụgbọ elu, mgbanwe ụlọ, mgbanwe injin na mgbanwe na ndozi nke ihe ndozi na ihe ndị ọzọ ụgbọ elu bụ akụkụ nke ọrụ ndozi ụgbọ elu enyere.